Madaxweynaha Hirshabelle iyo Xildhibaanno oo lagu soo dhoweeyay magaalada Dhuusamareeb – Kalfadhi
Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa galabta si weyn loogu soo dhoweeyay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug.
Xildhibaanno ka tirsan labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya oo laga xusi karo Xildhibaan Xasan Yare, Mustaf Dhuxuloow ayaa dhankooda gaaray Dhuusamareeb, si ay goob-joog uga ahaadaan shirka, inkastoo aysan ka qeyb-gelleynin shirka.
Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay ee gaara Dhuusamareeb, si uu ugu qeyb-gallo shirka Madaxweyneyaasha maamul Goboleedyada oo lagu wado in maalinta berri uu ka furmo Dhuusamareeb.
Shirka ayaa looga hadli doonnaa, arrimaha doorashooyinka, siyaasada guud ee dalka iyo khilaafka madaxda.
Dhinaca kale madax kale ayaa la filayaa in berri aroortii ay gaaraan magaalada, iyadoo ammaanka guud ee Caasimadda Galmudug si weyn loo adkeeyay.